Inona ny POE? Vola, fananana, karama ... ary zaraina ... ary haino aman-jery miovaova | Martech Zone
Inona ny POE? Vola, fananana, karama… Ary zaraina… ary haino aman-jery miovaova
Alarobia 13 Janoary 2021 Alarobia 13 Janoary 2021 Douglas Karr
Poe dia fanafohezan-teny ho an'ireo fomba telo fizarana atiny. Ny haino aman-jery Paid, Owned and Earned dia paikady azo iainana amin'ny fananganana ny fahefanao sy fanaparitahana ny fahafahanao miditra amin'ny media sosialy.
Media voaloa, tompony, ahazoana vola
Paid Media - dia ny fampiasana fantsom-doka misy karama handefasana ny fifamoivoizana sy ny hafatra ankapobeny an'ny marika amin'ny atiny. Natao hamoronana fahatsiarovan-tena, hanombohana endrika haino aman-jery hafa ary hahitan'ny mpihaino vaovao anao ny atiny. Ny tetika dia misy ny pirinty, radio, mailaka, karama isaky ny tsindry, doka facebook, ary sioka avoaka. Ny fandoavam-bola ny influencer dia azo raisina amin'ny haino aman-jery ihany koa rehefa misy ny fifanarahana hahazoana tambiny.
Haino aman-jery tompony - dia haino aman-jery, atiny ary sehatr'asa izay tompon'ny ampahany na tanteraka na fehezin'ny orinasa. Ny andraikitra dia ny fampidirana ny atiny, ny fananganana fahefana sy ny fifandraisana ary ny farany hampiasana ny fanantenana na ny mpanjifa. Ny tetika dia misy ny famoahana lahatsoratra bilaogy, fanambarana an-gazety, whitepapers, fandinihana tranga, ebooks ary fanavaozana ny media sosialy.
Media nahazo - dia ny fahazoana firesahana sy lahatsoratra amin'ny fantsona napetraka tsy azo tamin'ny alàlan'ny dokam-barotra - matetika dia fandrakofana vaovao izany. Ny loharanom-baovao ahazoana vola dia mazàna efa manana fahefana, laharana ary misy ifandraisany amin'ny indostria na lohahevitra iray, ka ny fahazoana milaza dia manampy amin'ny fananganana ny fahefanao sy hanaparitahana ny zavatra azonao. Ny tetika dia misy ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny fikarohana ara-organika ary ny fandaharam-pianarana tsy voaloa ho an'ireo mpanentana sy bilaogera amin'ny indostria ary koa ny tambajotra sosialy.
Ahoana ny amin'ny haino aman-jery zaraina?
Indraindray koa ny mpivarotra dia misaraka Media zaraina hiresaka mivantana amin'ireo paikady hitarika fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fizarana media sosialy. Izy io dia azo ekena amin'ny alàlan'ny dokam-barotra amin'ny media sosialy, marketing amin'ny influencer, na fampivelarana paikady fizarana sosialy fotsiny. Ny paikadin'ny haino aman-jery nozaraina dia mety ho fitambaran'ny haino aman-jery karamaina, manana ary azo voahidy iray.
Andraso… Ary ny haino aman-jery mifangaro?
Ity dia paikady mitombo ho an'ireo mpivarotra atiny. Ny haino aman-jery mifangaro dia fampifangaroana haino aman-jery karama, tompony ary karama ihany koa. Ohatra iray mety ho ny fanoratako ho an'ny Forbes. aho nahazo toerana fanoratana miaraka amin'ny Forbes Agency Council… Ary izany dia karama fandaharana (fanao isan-taona). Izany owned avy amin'i Forbes izay manana mpiasan'ny famoahana sy fanentanana izay miantoka izay atiny navoaka rehetra mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny kalitao henjana ary zaraina betsaka.
Tsy voafetra amin'ny media sosialy ny POE
Ity dia infographic mahafinaritra amin'ny POE avy amin'ny Biraon'ny dokambarotra ifandraisan'ny Canada ary Ny vondrona Brainstorm. Miresaka mivantana amin'ny POE avy amin'ny zoro media sosialy izay inoako fa misy fetra kely. Votoatiny marketing, doka, varotra fikarohana, marketing amin'ny finday… ny fantsom-barotra rehetra dia mifamatotra tanteraka amin'ny paikadin'ny haino aman-jery be karama, tompony na karama.
Ary ireo paikady ireo dia afaka mivelatra tanteraka ivelan'ny sehatra nomerika ho lasa marketing nentim-paharazana. Ny orinasa dia mamerina manamboatra fitaovana fanontana, ohatra, amin'ny lasa nomerika. Ny orinasa dia mividy habaka doka amin'ny takelaka fanaovana dokambarotra handefasana fifamoivoizana amin'ny tranokala tompona. Averina… Ny POE dia fototry ny paikady marketing ara-bola na voajanahary.
Mandalo anao ny infographic POE:
Famaritana ny maodely POE
Ohatra amin'ny paikady POE
Ahoana ny fomba handrafetana ny paikadinao POE
Tetika misy paikady POE
Paikady POE nomerika manerana ny fitaovana
Ny antony fampifandraisana momba ny POE
Karazana haino aman-jery voaloa, tompony ary ahazoana vola
Fandrefesana ny fahombiazan'ny POE
Tags: dokam-barotrahaino aman-jery niova fohaino aman-jery nahazonahazo haino aman-jery sosialyFacebookIAB CanadaBiraon'ny dokambarotra ifandraisan'ny Canadavarotra biolojikahaino aman-jery tomponyfananana haino aman-jery sosialyhaino aman-jery karamahaino aman-jery sosialy karamaPoehaino aman-jery nizaraNy vondrona BrainStorm
ActionIQ: Sehatra data ho an'ny mpanjifa manaraka mba hampifanarahana ny olona, ​​ny teknolojia ary ny fizotrany